Jordania: Ny Lahatsarin’ny Fanovana Ara-tsosialy! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Marsa 2018 3:10 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, Italiano, 繁體中文, 简体中文, English
(Marihina fa tamin'ny 3 Novambra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Maro ireo hetsika ara-tsosialy antserasera tao anatin'ny taona vitsy farany noho ny fahalalahan'ny aterineto tao Jordania. Ohatra vitsy nataon'ireo tanora Jordaniana ihany ny Ikbis.com, 7iber.com, ary Watwet mba hitadiavana fomba tsara sy mahomby kokoa hanehoan'izy ireo hevitra malalaka sy tsy misy fameperana. Anisan'ireo hetsika mamiratra rehetra ireo ny Aramram izay miavaka noho ny fampiasany ny teknolojian'ny taonjato faha-21 mba handrisihana ny fifanakalozan-kevitra momba ny olana ara-tsosialy, ara-politika, ara-toekarena, ary ara-tontolo iainana izay mahakasika ny vahoaka ny Jordaniana .
Ao anatin'ny tapatapa-dahatsary telo ka hatramin'ny dimy minitra, manasongadina ny tranga maromaro misy any Jordania ny Aramram. Nanapa-kevitra ny hanao antsafa niaraka tamin'ny Aramram izaho sy i Amahl Khouri amin'ny dingana faharoa amin'ny Fandaharanasan'ny Tanora Mpitantana izay natao tany Paris ny volana Novambra 2009, sy mba hamantatra bebe kokoa momba ny asan'izy ireo amin'ny fifanakalozan-kevitra nifanaovan'ny sobakolontsaina sy ny foko izay misy any Jordania :
Ankoatra ny asan'izy ireo ao Jordania, manantena ny hanitatra sy hanao tetikasa mitovy amin'izany any amin'ny firenena Arabo hafa ny Aramram mba handrisihana ny tanora handray ny vanim-potoan'ny fampahalalam-baovao sy hampiasa ny aterineto amin'ny heriny rehetra.